विप्रेषण वृद्धि जारी
असोजमा मात्र रू. ९३.१३ अर्ब भित्रियो
२०७७ मंसिर, १०
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या घटे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असोज महीनामा समेत विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा औसतमा मासिक ७३ अर्ब रुपैयाँको हारहारीमा विप्रेषण भित्रिने गर्छ । तर, गत असोजमा औसतभन्दा बढी अर्थात् रू. ९३ अर्ब १३ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको असोजसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवको असोजमा भने ७६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो ।
दशैंतिहारको समयमा अघिपछि भन्दा बढी विप्रेषण आउने गरेको रेमिट कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका महासचिव रीतेश मित्तलले चाडपर्वकै कारण असोजमा विप्रेषण आप्रवाह राम्रो देखिएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले दशैं, तिहार र छठ पर्वका लागि आवश्यक खर्च पठाउँदा असोजमा विप्रेषण आप्रवाह बढेको हो,’ उनले भने, ‘यो समयमा अघिपछि भन्दा बढी नै विप्रेषण आउँछ । तर, यसपटक भने अझ बढी नै विप्रेषण आएको देखियो ।’
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा विप्रेषण आप्रवाह १२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा रू. २ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा कायम भएको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने आकलन गरिए पनि नेपालमा गत जेठदेखि नै औसतभन्दा माथि अर्थात् ७३ अर्बभन्दा बढी विप्रेषण आप्रवाह भइरहेको छ ।
बन्दाबन्दीका शुरूका २ महीनामा वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरूमा समेत बन्दाबन्दी लगाइँदा पैसा पठाउन सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले चैत र वैशाखमा विप्रेषण आप्रवाह घटेको थियो । जेठ यता भने विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार हुँदै आएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट रकम आउन कम भएकाले विप्रेषण आप्रवाहमा सोचेजस्तो कमी नआएको बताइएको छ । बेलायत, अस्ट्रेलिया, यूएई, कोरियाजस्ता मुलुकबाट आउने विप्रेषणको ठूलो अंश हुन्डीमार्फत नै आउने गर्छ । तर, यस अवधिमा ती मुलुकबाट औपचारिक माध्यमबाट बढी विप्रेषण आएको बताइएको छ ।
पहिला विदेशमा भएका नेपालीले उपहारमा मोबाइल, ल्यापटपलगायत जिन्सी सामग्री किनेर नेपाल पठाउने गर्थे । तर, अहिले कोरोना प्रभावका कारण अन्तरराष्ट्रिय आवातजावत प्रभावित हुँदा त्यसको सट्टा पैसा नै आउँदा पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
कोरोनाको महमारीका कारण गत आवमा १० प्रतिशतले विप्रषण आप्रवाह घट्ने अनुमान थियो । तर, शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र घटेको थियो । चालू आवमा भने शुरूदेखि नै विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएको छ ।
विश्व बैंकले २०२० मा नेपाल आउने विप्रेषण १४ प्रतिशत, एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले २८ दशमलव ७ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । तर, गत असार यताको दरमा विप्रेषण आइरहने हो भने उनीहरूको प्रक्षेपण नमिल्ने देखिन्छ ।
दशैंतिहारपछि भने विप्रेषणमा केही कमी आएको नेपाल रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेको रीतेश मित्तलले बताए । ‘दशैंतिहारपछि कम्तीमा १ महीना विप्रेषण आप्रवाह कमी हुने नै गर्छ । त्यसपछि भने विप्रेषण आप्रवाह पुनः बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अब सीमा नाकाहरू खुल्ला हुँदा हुन्डी जस्ता अनौपचारिक कारोबार पुनः शुरू हुन सक्छन् । त्यसो भयो भने विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुन सक्छ ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भने अबका दिनमा विप्रेषण आप्रवाहमा अनुमान गरे जस्तो संकुचन नआउने बताए । ‘कोरोनाको यो विषम परिस्थतिमा पनि श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले त्यहाँ भएका कामदारहरूलाई स्वदेश नफर्क भनेका छन् । साथै, थप कामदारको माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा अबका दिनमा विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन आउने सम्भावना कम छ ।’
एभरेष्ट चीनी उद्योगले विद्युत उत्पादन थाल्यो[२०७७ माघ, १४]
निर्जीवन बीमा ९.९० प्रतिशतले बढ्यो[२०७७ माघ, १३]
३२.१२% ले बढ्यो जीवन बीमा व्यवसाय[२०७७ माघ, १२]
विद्युत् विक्री गर्न भारतमा हालेको टेन्डरबाट बाहिरियो प्राधिकरण[२०७७ माघ, ११]
कुलेखानीमा १०० मेवाको पम्प स्टोरेज प्लान्ट बनाउने तयारी[२०७७ माघ, ९]
भारतीय राजदूतावासद्वारा ७२ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रकम प्रदान[२०७७ माघ, १४]
खोप लगाउन आवश्यक सबै नागरिकलाई चरणबद्ध व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपतिको विश्वास[२०७७ माघ, १४]
आजदेखि कोरोना भ्याक्सिन लगाउन शुरू[२०७७ माघ, १४]
हालसम्मकै ठूलो सौर्य ऊर्जा आयोजना बन्दै[२०७७ माघ, १४]
भन्सार सेवा तथा पूर्वाधारको सुधारलाई गति दिन परिसंघको आग्रह[२०७७ माघ, १४]
सुपरमादी हाइड्रोपावरको विक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल नियुक्त
एक्स बक्सको विक्रीमा उच्च वृद्धि
होटल व्यवसायी र ट्रेड युनियन बीच नयाँ सम्झौता
१ एमडीबी घोटाला : गोल्डम्यान श्याख्सका हाकिमको तलब सुविधामा १ करोड डलर कटौती
टिकटकले भारतमा कटौती गर्‍यो रोजगारी